Sool & Sanaag oo yeelanaya maamul federaal ah | Caasimada Online
Home Warar Sool & Sanaag oo yeelanaya maamul federaal ah
Sool & Sanaag oo yeelanaya maamul federaal ah
Muqdisho (Caasimada Online) – Magaalada Muqdisho waxaa shalay lagu qabtay kullan ballaaran oo looga hadlayay maamul loo sameeyo gobalada Sool iyo Sanaag, waxaana ka qeybgalay Odayaal dhaqameed, xildhibaanno ka tirsan maamulka Khaatumo iyo siyaasiyiin.
Qaar ka mid ah waxgaradkii ka qeybgalay kulankaasi ayaa sheegay in muhiim ay tahay in maamul gobaleed loo sameeyo gobaladaasi, si ay uga mid noqdaan dowlad gobaleedyada Federaalka.
Kulankaan ayaa markii uu soo gaba gaboobay waxaa Idaacadda Goobjoog la hadlay Maxamed Yuusuf Jaamac Indho Sheel oo mar soo noqday madaxweynaha Khaatumo, waxaana uu sheegay in la’isla gartay in la helo maamul mideeya Sool iyo Sanaag.
Waxa uu sheegay in shacabka ku dhaqan Labadaasi gobal ay xaq u leeyihiin inay helaan maamul ka shaqeeya horumarkooda, islamarkaana dadkaasi qeybtooda ka siiya horumarka la hiigsanayo.
Indho Sheel ayaa ugu dambeyn ugu baaqay guud ahaan shacabka deggan Sool iyo Sanaag in ay u istaagaan sidii ay u heli lahaayeen maamul ay xur u yihiin, kana tirsan dowladda Federaalka ah.
Gobalada Sool iyo Sanaag waxaa ka taagan muran badan oo xagga maamulk ah, iyadoo halkaasi ay isku haystaan maamullada kala ah Somaliland, Khaatumo iyo Puntland.